> Resource > DVD > Download DVD gubi ugu dhaqsiyaha badan u Win / Mac
Waxaan la isticmaalayo waxaa Windows DVD gaare iyo reeeeaallllyyyy gaabis ah waa wax la doorbidayo barnaamijyo waa ka dhaqso badan DVD daaqadaha abuuray?
Sida qofka kor, waxa kale oo aad ka heli kartaa naxaysaan iyo lur ay mulaca-xawaare aad DVD gubi, waxa ay noqon Windows DVD gaare ama Mac iDVD. Haa, sugaya badan ama xataa ilaa 10 saacadood sugaya gubanaya ah DVD video ama DVD disk waa nooc ka mid ah dilaaga nolosha. Nasiib wanaag, la Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ), waxaad waqti badan badbaadin karaan hadda. Waa DVD abuure ugu dhaqsiyaha badan taas oo ka farxiyay la processor iyo GPU labadaba, lagana filaayo in threading hyper iyo Processor Creech sare. Marka la barbar dhigo barnaamijyada kale ee la mid ah ka dhacay ee lagu iibiyo suuqa, waxaa kasoo muuqday shaqo adag iyo hufnaan sare. Si kastaba, wax arkaya rumaysta. Hadda free version maxkamad ay soo dejisan in ay la kulmaan xawaaraha gubashadii super si degdeg ah hadda.
Fiiro gaar ah: In hage soo socda, inaan qaato version Windows sida tusaale ahaan ka. DVD Abuuraha faestest u Mac sidoo kale la wadaagin feature la mid ah, oo aad ku gubi karaa videos in DVD ee Mac la tallaabooyinka la mid ah.
1 warbaahinta Load files galay DVD Converter ugu dhaqsiyaha badan
Soonkii DVD software buring sidoo kale horyalka Talyaaniga iyo dareen interface. Si aad u dajiyaan ilaha videos, sawiro ama duubey, riix "Import" badhanka xitaa aad foder file ama si fudud u jiidi files warbaahinta in ay interface.
Marka aad ku shuban oo dhan faylasha, doonaa, waxay ku tusi doono dhinaca bidix sida thumbnails. Double u riix, iyaga waxaad ku eegaan karaa shaashadda midig.
2 files Edit iyo codsan DVD menu ah (optional)
The software DVD ugu dhaqsiyaha badan abuuraya sidoo kale gelineya inaad sooman tahay oo ku haboon shakhsi aad videos. Riix icon qalin video kasta oo horyaalka ku ag yaal, suuqa kala edit a tusi doonaa. Halkan, waxaad samayn kartaa oo dhan itusi caadiga ah sida la qabsado dhalaalka, bedelkeeda, qoqobada 90 darajo, lana siii bar madow, iwm
Wixii sawiro ah, waxa kale oo aad sameyn kartaa kala-guurka, asalka music iyo image si ay u shakhsiga iyo macno leh.
Hubi in wax walba u dhacaan sida aad jeceshahay adigoo gujinaya "Kulanka Xiisaha Leh" badhanka si ay u hubiso DVD movie. Haddii ok, kaliya geliso disc maran DVD sida D9 ama 5 si waafaqsan content oo guji "Guba".
Talooyinka DVD degdeg ultrafast gubanaya:
1. In hoose ee suuqa kala barnaamijka, waxaad dooran kartaa tayada DVD wax soo saarka. Guud ahaan, heerka doorasho la doorto waa by default. Haddii aad file asalka ah waa in tayo sare leh, ama aad rabto in la hagaajiyo tayada gubashadii ay, sidoo kale waxaad dooran kartaa "tayo sare leh" doorasho. Laakiin fadlan maskaxda ku hay in xawaaraha gubashadii noqon doonaa muddo ka badan hal caadiga ah.
2. Haddii aad leedahay files kala duwan si ay u gubaan, aad soo jeediyay in la sameeyo menu sax ah si aad u DVD video. Ugu dhaqsaha badan DVD Creator waxay bixisaa in ka badan 90 teamplates in aad kor u qaado oo dheeraad ah u astaysto. Si aan ku bilaabo, riix "Menu" tab on sare ee suuqa kala barnaamijka, iyo codsan style aad ugu jeceshahay. Sida xaqiiqada ah, "menu No" sidoo kale waa la heli karaa.
Waa fiican fudud oo degdeg ah si ay u dhigaysa qaab DVD ka files warbaahinta, sax? Isku day inaad hadda!
Top 10 Beddelka DVD cirib